Smart TV waxa ay soo bandhigtaa Qaab Filim sameeye Cusub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Smart TV waxa ay soo bandhigtaa Qaab Filim sameeye Cusub
Laga bilaabo usbuucan, LG wuxuu bilaabay inuu soo saaro casriyeyn muuqaal kaas oo u sahli doona dhammaan macaamiisha LG 2020 iyo 2021 4K iyo K HUD Smart TV ee adduunka inay si toos ah u awoodaan inay si toos ah u daawadaan filimada iyo taxanaha Prime Video ee Filim Sameeyaha ™, taasoo u oggolaanaysa inay daawadaan. waayo-aragnimo u yeelo sida ay curiyeyaashu ugu talo galeen.
Habka Filim sameeye waxaa abuuray HUD Alliance, oo ka kooban hormoodka adduunka ee soosaarayaasha elektiroonigga ah ee macaamiisha, filimada iyo istuudiyaha telefishinka, qaybiyayaal ka kooban iyo shirkadaha tignoolajiyada, iyagoo raadinaya inay hubiyaan khibradaha daawashada HUD ee ugu fiican. Markii ugu horreysay waxaa la soo bandhigay 2019 oo lagu soo bandhigay LG TV-yada 2020, Qaabka Filim sameeyaha waxaa loogu talagalay in lagu ilaaliyo ujeeddada muuqaalka ee abuuraha nuxurka, taasoo keenaysa khibradda daawashada guriga sida ugu dhow ee suurtogalka ah ee sii deynta masraxa dhabta ah.
LG iyo Amazon waxay hadda qaadeen tillaabo dheeri ah oo ay ku jiraan waxyaabaha Prime Video-ga ah ee ku dhexjira calaamad si toos ah u kicinaysa Qaab-sameeyaha Filimka ee 4K iyo K HUD LG TV moodooyinka ku shaqeeya webs 5.0 iyo webs 6.0. Awooddan loogu talagalay TV-yada ku habboon si ay u ogaadaan oo ay u hagaajiyaan goobaha loogu talagalay Habka Filim-sameeyaha iyada oo aan loo baahnayn daawadayaasha si ay u beddelaan goobta gacanta ayaa ah warshad marka hore waxayna u xaaraysaa dariiqa TV-yada mustaqbalka si ay si fiican u taageeraan adeegyada qulqulka iyada oo aan lagu soo rogin tallaabooyin dheeraad ah daawadayaasha.
In kasta oo astaamaha habaynta sawirku ay ka mid yihiin fududaynta dhaqdhaqaaqa iyo fiiqista sawirka ay ku habboon yihiin noocyada ugu badan ee waxyaabaha ay ka midka yihiin ciyaaraha iyo bandhigyada TV-ga, waxay mararka qaarkood ka dhigi karaan filimada muuqaalku u ekaado mid aad u siman oo si xad dhaaf ah loo farsameeyay. Qaab-sameeyaha Filimku wuxuu si toos ah u dami doonaa goob kasta oo sawir-samayn ah oo ka dhigi kara filimada inay dareemaan wax aan caadi ahayn oo sababi kara inay si ka duwan u soo bandhigaan sida agaasimayaashoodu ay u rabaan iyagoo sidoo kale ilaalinaya saamiga asalka ah ee filimka, midabada iyo heerka qaab-dhismeedka si loo helo khibrad dhab ah. Marka lagu daro midabada madow ee ugu qoto dheer, isbarbardhigga la xoojiyey iyo midabada firfircoon ee TV-yada horumarsan ee Lugta, daawadayaashu waxay la kulmi doonaan qoto dheer iyo xaqiiqo aan la barbar dhigi karin iyada oo loo marayo xulashada ballaaran ee filimada iyo taxanaha Prime Video, oo ay ku jiraan Amazon Originals sida The Marvelous Mrs. Mussel, The Boys Dagaalka Berri iyo taxanaha aadka loo filayo ee soo socda The Wheel of Time premiering November 19. Hal-guji gelitaanka barnaamijka Fiidiyowga Fiidiyowga waxaa bixiya furaha kulul ee Lugaha Magic Remote.
Marka laga soo tago tayada sawirka xiddigaha, Leg's HUD TVs oo ay ku jiraan safkeeda OILED TV ee yaabka leh, waxay ku faanaan astaamo badan oo sii wanaajiya khibradda daawashada shaleemada. Dolby Vision ™ IQ waxay si caqli-gal ah u hagaajisaa goobaha sawirka iyadoo ku saleysan nooca nuxurka iyo xaaladaha iftiinka iftiinka, taasoo keentay tayada muuqaalka ugu fiican filim kasta iyo deegaan kasta. Si loo helo codka sare, Dolby Atoms® waxa uu sahlayaa meel fagaare ah oo faahfaahsan kaas oo ka caawinaya in ay kor u qaadaan daawadayaasha wax kasta oo ay daawadaan.